महाधिवेशनको मिति तोकौं, बिचार र नेतृत्वको फैसला महाधिवेशनले गर्ने छ ! « Media for all across the globe
महाधिवेशनको मिति तोकौं, बिचार र नेतृत्वको फैसला महाधिवेशनले गर्ने छ !
पार्टीभित्र बहस पेचिलो बन्दै गएको छ । नेताहरु छलफलमा व्यस्त हुनुहुन्छ , छिटो भन्दा छिटो उपयुक्त निकास निकाल्न नेता कमरेडहरुलाई आम पार्टी कार्यकर्ताको दबाव छ । छिमेकी देश भारत हाम्रो पार्टी फुटाउन निकै बल गरेर लागेको छ ।
भारतीय मिडिया हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बिरुद्धमा सम्पुर्ण तागतका साथ लागेको छ । यतिबेला प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्नु भनेको भारतको जीत देखाउनु नै हो । हामीले भारतको मनोबल उठाउने, नेपाल, नेपाली र हाम्रो पार्टीलाई हराउने गरि किमार्थ भुमिका खेल्न सक्दैनौं ।
दोस्रो कुरा नेतृत्व परिवर्तन महाधिवेशनबाट मात्रै गर्ने हो । यदि कमिटीबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्न थालियो भने सधैं बहुमत पुर्‍याउने र नेतृत्व परिवर्तन गर्ने खेल निरन्तर चलिनै रहन्छ । यस्तो कदमले पार्टी, आन्दोलन र बिचार मर्दै जान्छ । त्यसैले महाधिवेशनको मिति तोकौं , बिचार र नेतृत्वको फैसला महाधिवेशनले नै गर्ने छ ।